Sɛnea Kɔla Ma Wote Nka ne Nea Kɔla Biara Kyerɛ
Ɔwɛn-Aban | October 2013
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Sɛ Wuhu Kɔla Biara a, Wote Nka Sɛn?
Biribiara a wubehu no, w’ani ne w’adwene na ɛka bom yɛ adwuma ma wote dekode no ase. Sɛ wuhu aduaba bi a, wutumi hu sɛ wudi a ɛbɛyɛ yiye. Wohwɛ wim nso a, wutumi hu sɛ nsu bɛtɔ anaa ɛrentɔ. Nea worekenkan yi nso, wuhu nsɛmfua no a, wunim nea ɛkyerɛ. Nea ɛwom ara ne sɛ kɔla na ɛboa wo wɔ saa nneɛma no nyinaa mu. Ampa?
Aduaba a wuhui no, ne kɔla na ɛma wuhui sɛ abere na wudi a ɛbɛyɛ yiye. Sɛnea wim ne mununkum kɔla te na ɛma wuhui sɛ nsu bɛtɔ anaa ɛrentɔ. Ade a worekenkan yi nso, nneɛma abien na ɛma wuhu no yiye: nkyerɛwee no kɔla ne ade a wɔakyerɛw agu so no kɔla. Nea yɛreka yi ebia w’adwene nkɔɔ so, nanso biribiara a wuhu no, kɔla na ɛboa wo ma wutumi te ase. Akwan horow pii nso wɔ hɔ a kɔla tumi ka yɛn.
KƆLA TUMI KA SƐNEA YƐTE NKA
Sɛ wuwura sotɔɔ bi mu a, wubehu sɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ no, wɔahyɛ da ayɛ no sɛnea w’ani bɔ so a, ɛbɛyɛ wo fɛ. Ebia w’adwene remma so, nanso aguadi ho adawurubɔfo tɔ wɔn bo ase pɛ kɔla a wobetumi akeka abom ama ɔbea oo, ɔbarima oo, ɔpanyin oo, akwadaa oo, obiara benya nea n’ani gye ho. Wɔn a wɔde nhwiren ne ade siesie fie, adepamfo, ne wɔn a wodi adwini nso nim sɛ kɔla betumi ama nkurɔfo ani agye biribi ho.
Baabiara nko ne sɛnea wɔte kɔla biara ase. Wokɔ Asia a, ebinom bu ade kɔkɔɔ sɛ ɛkyerɛ nhyira ne anigye, nanso wokɔ Afrika mmeae bi a, kɔkɔɔ gyina hɔ ma awerɛhow. Kɔla no bi de, sɛ obi fi he oo, sɛ ofi he oo, wɔn nyinaa bu no adekoro. Ma yɛnka kɔla abiɛsa ho asɛm na yɛnhwɛ sɛnea ebetumi aka wo.
KƆKƆƆ yɛ kɔla bi a ano yɛ den. Sɛ nkurɔfo hu ade kɔkɔɔ a, nea ɛba wɔn tirim ne ahoɔden, ɔko, anaasɛ biribi a ɛyɛ hu. Kɔkɔɔ yɛ kɔla bi a etumi twe yɛn adwene ntɛm, etumi ma nipadua no yɛ adwuma ntɛmntɛm ma yɛn home kɔ soro na yɛn mogya nso bɔ ntɛmntɛm.
Wohwɛ Bible mu a, Hebri asɛm a wɔkyerɛɛ ase “kɔkɔɔ” no kyerɛ “mogya.” Bible de kɔkɔɔ ka aguaman wudifo bi ho asɛm wɔ kwan bi so ma etumi ka nnipa tirim. Ɛka sɛ ɔhyɛ atade afasebiri ne atade kɔkɔɔ, na ɔte “akekaboa kɔkɔɔ a abusudin ayɛ no mã” so.—Adiyisɛm 17:1-6.
AHABAMMONO de, sɛ ɛnam ha a, na kɔkɔɔ nso nam ha; ɛma nnipa ho dwo no. Ahabammono yɛ ahotɔ kɔla na ɛne asomdwoe na ɛnam. Sɛ yɛkɔ baabi kohu nnua ne nhabamma frɔmfrɔm a, ɛma yenya ahomeka. Genesis nhoma a ɛka adebɔ ho asɛm no kyerɛ sɛ Onyankopɔn na ɔde sare ne afifide momono maa nnipa.—Genesis 1:11, 12, 30.
FITAA yɛ kɔla a ɛtaa gyina hɔ ma hann, bammɔ ne ahotew. Yetumi de ka papayɛ, bemdi, ne kronnyɛ nso ho asɛm. Fitaa ne kɔla a Bible taa ka ho asɛm. Anisoadehu a ebinom nyae kyerɛ sɛ wohui sɛ nnipa ne abɔfo hyehyɛ ntade fitafitaa, na wɔde kyerɛe sɛ wɔyɛ atreneefo a wɔn ho tew Onyankopɔn anim. (Yohane 20:12; Adiyisɛm 3:4; 7:9, 13, 14) Ebi nso ne apɔnkɔsotefo a wɔhyehyɛ nwera fitaa tete apɔnkɔ fitaa so, na wɔde gyina hɔ ma trenee ko. (Adiyisɛm 19:14) Onyankopɔn de fitaa yɛ nhwɛso ma yehu sɛ wayɛ krado sɛ ɔde bɔne bɛkyɛ. Ɔka sɛ: “Sɛ mo bɔne te sɛ koogyan a, ɛbɛyɛ fitaa te sɛ sukyerɛmma.”—Yesaia 1:18.
KƆLA TUMI MA YƐKAE NNEƐMA
Kɔla ho asɛm a ɛwɔ Bible mu no ma yehu sɛ Onyankopɔn nim atenka a kɔla ma nnipa nya. Wohwɛ Adiyisɛm nhoma no mu a, wubehu sɛ ɛka too hɔ sɛ akokoakoko ne ɔkɔm bɛba, na aduankɔm ne ɔyaredɔm de ɔpatuwu nso bɛba, na ɛno na nnɛ ɛrekɔ so no. Nea ɛbɛma yɛakae nea ebesisi no, wɔde anisoadehu kyerɛkyerɛ mu; ɛyɛ nnipa bi a wɔtete apɔnkɔ so. Apɔnkɔ no nyɛ apɔnkɔhunu, na mmom pɔnkɔ biara kɔla kyerɛ nea ɔbɛyɛ.
Ɔpɔnkɔ a odi kan no yɛ fitafita, na ogyina hɔ ma Kristo Yesu trenee ko no. Nea odi hɔ no yɛ ɔpɔnkɔ kɔkɔɔ, na ɔno nso gyina hɔ ma amanaman no ntam akokoakoko. Nea odi so no yɛ ɔpɔnkɔ tuntum bi, na ogyina hɔ ma ɔkɔm. Ɛno akyi no, “ɔpɔnkɔ a ne ho nsonso bi [puei]; na nea ɔte no so no din de Owu.” (Adiyisɛm 6:1-8) Apɔnkɔ no biara kɔla yɛ biribi ho sɛnkyerɛnne, na atenka a saa kɔla no tumi ma yenya no ne saa sɛnkyerɛnne no kɔ. Ɛnyɛ den koraa sɛ yɛbɛkae apɔnkɔ no kɔla ne nea ɛkyerɛ ma yɛn nnɛ.
Bible de kɔla ayɛ nhwɛso pii de akyerɛkyerɛ nsɛm mu akɔ akyiri. Nea ɔbɔɔ kanea ne kɔla ne nnipa aniwa no nim nkyerɛkyerɛ paa, enti ɔde kɔla kyerɛkyerɛ nneɛma mu ma emu da hɔ ma wɔn a wɔkenkan Bible, na ɛka wɔn tirim. Kɔla boa yɛn ma yɛte nneɛma ase. Kɔla tumi ka sɛnea yɛte nka. Kɔla tumi ma yɛkae nneɛma bi a ɛho hia. Kɔla yɛ akyɛde pa a yɛn Bɔfo no de ama yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a asetena bɛyɛ anigye.
Bere a Noa ne n’abusua fii adaka no mu puei no, Onyankopɔn de kɔla ahorow bebree yɛɛ nyankontɔn de yɛɛ sɛnkyerɛnne sɛ ɔrehyɛ bɔ sɛ ɔremfa nsuyiri nsɛe adesamma bio da. Ɛbɛyɛ sɛ bere a Noa ne n’abusua huu sɛnkyerɛnne a emu kɔla dɔɔso no, ɛyɛɛ wɔn fɛ, na ɛkaa wɔn tirim afebɔɔ.—Genesis 9:12-17.
Nnipa nhia kɔla ahorow pii na ama wɔatena nkwa mu. Enti ebia ɛbɛyɛ wɔn a wogye adannandi tom no nwonwa sɛ nnipa tumi hu kɔla ahorow pii saa. Nanso, sɛ yegye tom sɛ Ɔbɔadeɛ bi na ɔbɔɔ yɛn ɔkwan bi so a ɛma yetumi hu kɔla ahorow pii saa a, ɛma yehu sɛ dɔ a ɔdɔ yɛn nti na ɔde saa akyɛde yi maa yɛn na ama yɛn ani agye.
ASƐM A ƐDA SO Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Woma Bible Ho Asɛm Hia Wo?
ASƐM A ƐDA SO Dɛn na Ɛde Yɛn Bepuee Ha?
ASƐM A ƐDA SO Onyankopɔn Yɛɛ Nhyehyɛe a Ɔde Begye Adesamma
ASƐM A ƐDA SO “Yɛahu Mesia No”!
ASƐM A ƐDA SO Asɛmpa Wɔ Hɔ Ma Adesamma Nyinaa
BƐN ONYANKOPƆN ‘Yehowa De Afiri Mo Korakora’
BIBLE TUMI SESA NNIPA “Ná Nnipa Bebree Tan Me”
Adɛn Nti na Mokɔ Nkurɔfo Afie Mu?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN October 2013 | Asɛm Bɛn Paa na Ɛwɔ Bible Mu?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN October 2013 | Asɛm Bɛn Paa na Ɛwɔ Bible Mu?
October 2013 | Asɛm Bɛn Paa na Ɛwɔ Bible Mu?
ƆWƐN-ABAN October 2013 | Asɛm Bɛn Paa na Ɛwɔ Bible Mu?